Gudoomiyaha baarlamanka oo ku baaqay in la Joojiyo Dagaalada K/somalia, Xoghayn KMG ahna magacaabay.
Shariif Xasan Shiikh Aden
Somalitalk.com, Nairobi | Sept 19
Afhayeenka baarlamaanka dowlada KMG ah ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka gudahiisa in ay joojiyaan dagaalada ka socda kismaayo iyo goobaha kale ee u dhawba.
Shariif Xasan Sh,Aadan oo markii ugu horeysay gudoominayay Baarlamaanka waxa uu baaqan u soo jeediyay labada dhinac ee kala hogaamiya maliishaadka iskaga soo horjeeda Kismaayo in ay u daneeyaan shacabka soomaaliyeed ee ka soo daalay dhibaatada dagaalada sokeeye ee ka dhacay somaliya, xalkuna uu ku jiro in la wada hadlo labada dhinacbana waxa uu ugu baaqay in ay ka soo qayb galaan shirka iyagoo u tanaasulaya shacabka soomaaliyeed ee rajada wayn ka qaba dowlada lagu dhisayo halkan.
Waxa uuna ka codsaday mudanayaasha baarlamaanka in aysan ka aamusin arrintan gacan muuqatana ka gaystaan sidii loo dhamayn lahaa xiisadaha ka taagan kismaayo ee aagaga ku dhawba ee ay dagaalada ka dhacayaan.
Gudoomiyaha waxaa kale oo uu baarlamaanka ka codsaday afar xubnood uu magacabaay in ay si KMG ahaan ah u sii wadaan shaqada Xoghaynta Baarlamaanka ayna xor u yihiin in ay wax ka badalaan baarlamaanka magacyadan hadii la isla garto,balse baarlamaanka ayaa ku raacay in ay aqbaleen afartan xubnood oo kala ahaa.
1: Axmed Maxamed Saleebaan
2: Ibraahim Shiikh Cali Jeebbe
3: Cali Axmed Jaamac "Jangali"
4: Drs. Fahma Axmed Nuur
Xubanahan ayaa si KMG ahaan ah waxay u qaban doonaan xoghaynta baarlamaanka inta laga dooranayo Gudoomiye Ku xigeenada baarlamaanka oo lagu wado maalinta talaadada ah.
Dhinaca kale waxaa la dhaariyay mid ka mid ah xildhibaanada dhiman oo lagu magacaabo Axmad Cismaan Jibriil.
SABABTA KEENTAY DIB U DHACA DOORASHADA MADAXWEYNAHA.
Dood ka dhalatay hadal uu gudoomiyaha u soo bandhigay baarlamaanka oo ahaa in doorashad madaxweynaha dib loogu dhigo illaa bisha ogtobar 2deeda ayaa keentay in siyaabo kala duwan ay baarlamaanka u soo jeediyeen in ay doorashadaasi u dhacdo.
Mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ah Coll.C/llaahi yuusuf ayaa soo jeediyay in doorashadu ay dhacdo ogtobar 15keeda oo ku aadan sanad guurada 2aad ee shirka dib u heshiinta soomaaliyeed,cod loo qaaday arrintaas ayaa ugu dambayn waxaa la isku raacay in bishan tobankeeda la doorto ,madaxweynahah Dowlada KMG ah ee soomaaliya.
Mudanayaasha u codeeyay in ogtobar tobankeda la doorto madaxweynaha ayaa gaarayay 179 xildhibaan, halka 12 ka mid ah ay u codeeyeen in xiliga doorashada ay dhacdo 2da ogtobar, waxaa ka aamustay 5 xildhibaan, sidaasna waxaa codka ugu badan uu ku noqday in la isku raacay 10ka bishan in ay dhacdo doorashad madaxweynaha KMG ah ee Dowlada soomaaliya.
Hakinta doorashada madaxweynaha ayay siyaabo kala duwan u arkaan mudanaaysha baarlamaanka iyo dadka siyaasadda soomaaliya ku dhex jira, qaar ka mid ah mudanayaasha ayaa iigu waramay in dib u dhigistan ay sababi karto in uu sii dheeraado shirka soomaalida, halka qaar kalana ay qabaan in howlo badan ay harsan yihiin dagaalo sokeeyena ay ka jiraan dalka meelo ka mid ah sidaas darteedna aysan wax dhib ah keeni doonin baaqashan.
Wasiiradda arrimaha dibada ee urur goboleedka IGAD ayaa qaarkood waxay safar ugu maqan yihiin xarunta QM,midoobay ee Newyork si ay ugala xaajoodaan shirka dib u heshiinta soomaaliyeed ee gagabada ah,sidii ay ugu heli lahaayeen taageero dhaqaale iyo aqoonsi ku filan,safarka wasiirada ayaa macquul ka dhigi kara laf ahaantiisa baaqashada doorashada madaxweynaha inkastoo ay ogaayeen waqtiga loo qabtay doorashada qoraaladoodiina aysan uga hadlin.
Ugu dambayn waxaa goobaha shirarka ka socda qabanqaabo iyo diyaar garow loogu jiro Doorashadaas iyadoo ay jiraan isbahaysiyo kala taageera musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynaha jamhuuriyada federalka ah ee soomaaliya. walina waxaa muuqata in aysan dhamaanin ururadii iyo isbahaysiyadii jiray ka hor dhaarinta Baarlamaanka KMG ah dibna boorka looga jafay doorashada madaxweynahana ay ku salaysnaanto sida ay qabaan aqoonyahaniin wax kala socda shirka soomaaliyeed.
Doorashadii Madaxweynaha Dowlada KMG ah oo Dib loo Dhigay
Shirkii maanta ee Baarlamaanka Soomaalida ee ku shiraya Kenya ayaa laga soo saaray in... Guji
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 19, 2004
�SHIRKA KENYA OO SOO GAARAY MEESHII UGU HALISTA BADNAYD
Faalladii Maxamed Jantiile
�BAARLAMAANKA CUSUB SHAKI BAA KUJIRA SHARCI AHAANSHIHIISA
Faalladii Maxamed 'Ingiriis'
�XILMA DHIBAYAASHA NA LOO XULAY: Faaladii Cabdulla
�Xildhibaannadii Soomaaliyeed oo Xil-kasnimo Muujiyey [C/waxid]
�Shariif, Sheikh mise Qaadwale? [Xirsi]
�Shacbiga: Shariifkii beey sharaxdeen; Shiikhii beey iska shub, dheheen